Dampier, ụsọ mmiri na-amaghị nwoke nke Australia | Akụkọ Njem
Carmen Guillen | | Australia, General, Oceania
Ọ bụrụ na enwere obere oke osimiri mara mma ma mara mma ebe enwere, enweghị obi abụọ Dampier, ụsọ mmiri na-amaghị nwoke nke Australia. Ahuru m ya ubochi gara aga na akwukwo m wee hu ya n'anya ... O bu otu n'ime ebe ichoro na foto n'ime otu akwukwo ma gbachara oso bia dee aha ya n'akwukwo ahu nke isiokwu ya bu "Njem ndi ekwere na nkwa. . "
Amaghị m ihe ọ bụla gbasara ụsọ oké osimiri a na nyocha ọ bụghị naanị na m hụrụ onyinyo ndị magburu onwe ha, nke m na-agaghị akọrọ gị taa n'isiokwu a, mana achọpụtakwara m ọtụtụ ihe kpatara m ga-eji leta ya. Ọ bụrụ na ọ dọọrọ uche gị ma ọ bụ na ị hụrụ ya n'anya na foto mbụ, dịka m mere, gụọ.
1 Ebe obibi Dampier
2 Nlegharị anya na ebe obibi
3 Ihe omume ị nwere ike ime
Ebe obibi Dampier
Dampier na-bụ agwaetiti nke agwaetiti ndị dịpụrụ adịpụ nke Australia guzobere. Ọ dị nso na obodo ukwu nke naanị mmadụ 1.372 bi na ya nwere otu aha, Dampier. Onye England buuru ya na onye nyocha ya gara ebe a na 1699, William Dampier natara aha ya.
Ha dị na ngụkọta Akara 31 ndi aha ha kachasi na mbu, ma oburu n’ikpeghi onwe gi ikpe: East Middle Intercourse, West Intercourse, West Middle Intercourse, Keast, Kendrew, Lady Nora, Legendre, East Lewis, West Lewis, Malus, Mawby, Mistaken, Rosemary, Tidepole , Tozer na Wilcox, Angel, Brigadier, Cohen, Conzinc, Delambre, Dolphin, Eaglehawk, Enderby, Egret, Gidley, Goodwyn, Haycock, Huay, Intercourse, na nke ikpeazu, East Intercourse.
Pụrụ iche ebe a ga-hụrụ bụrụ na nke ileta a mara mma nke Australia agwaetiti, bụ Broome, pealu nke ebe ahụ, na Cape Leveque, jupụtara n'ọhịa, ezigbo mma na ọdịdị ndị Aboriginal dị ịtụnanya.
Nlegharị anya na ebe obibi
Ọ bụrụ n ’ị gaa ebe ahụ, ị ​​kwesịrị ịmata na ụdị ebe obibi dịkarịsịrị ebe ahụ 'Bed & nri ụtụtụ' ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ ndị magburu onwe ha, otu n'ime ihe ndị kacha amasị m na mbụ 'Ctlọ Pinctada McAlpine ' na Broome.
Ebe obibi a dị nanị nkeji 5 site na etiti Broome na Obodo osimiri. Ọ na-enye Wi-Fi n'efu, nri ụtụtụ na ọdọ mmiri n'èzí. E wuru ụlọ ala a na 1910 ma mesịa ghọọ ebe obibi dị oké ọnụ ahịa. Ọ nwere ụlọ ndị mara mma, ha niile nwere minibar, friji na otu tii na kọfị zuru ezu. Havefọdụ nwere patio nkeonwe ha na -echekwa ogige.
Maka ndị na-amasị golf, ị ga-enwe obi ụtọ ịmara na saịtị a bụ naanị nkeji 5 site na ụgbọ ala site na Monzón Gallery na campo de goofu nke Broome. Ihe Njem Ntugharị Broome Hovercraft O ji nkeji iri na ise eji ụgbọ ala.
Ihe omume ị nwere ike ime
Ọ bụrụ na anyị nọ ezumike ma ọ bụ zuo ike ruo ụbọchị ole na ole, ọ bụghị ihe niile ga-ehi ụra ma nọrọ na "Mondays in the Sun" mode ... Dampier bụ ebe a ga-enwe ọ andụ na ebe anyị achọghị ka ị hapụ uche nke ịchọpụta agwaetiti ya na isi ha niile, ebe a Anyị na-akwado ụfọdụ ọrụ ị ga - eme ma ọ bụrụ na ị nwere ihu ọma ịga leta mpaghara gị:
Mee a njem ụgbọ mmiri n'ụsọ oké osimiri nke Western Australia.
Sa ahụ na Edith Falls, ihe ngosi nsụda mmiri emi odude ke Nitmiluk National Park.
Gaa Leta Windjana Gorge National Park, nke nwere hekta 2.134, nke gosipụtara ọwa mmiri dị egwu sitere na Osimiri Lennard. Otu n'ime ebe ndị ahụ n'agbanyeghị agbanyeghị njem ị na-ahụghị kwa ụbọchị ...
Tinye na a ụzọ-ụzọ tinyere mkpọda Cape Leveque iji na-enwe mmasị ya ọhịa osimiri ... Ha mara mma!
Kamel na-agba ịnyịnya site n'akụkụ dị iche iche nke mpaghara Australia. E si India na Afghanistan bute kamel ndị a, ha bụ otu n'ime ụzọ ụgbọ mmiri kacha mma maka ndị njem nleta na mpaghara ahụ.
Lelee ọdịda anyanwụ site n'ụsọ osimiri ọ bụla ... Ha nwere agba dị iche karịa ka anyị na-ahụ kwa ụbọchị.
Ma oburu na inwere oge kari, ime ihe a ụgbọ mmiri Willie Pearl Lugger, nke na-aga n’ikpere mmiri Australia dum a na-emetọghị emetọ.
Anyị nwere olile anya ma nwee olile anya na Dampier, dịka ọ dị taa, ghọrọ ebe achọrọ maka ọtụtụ n'ime unu ekele n'edemede anyị… Gini ma ọ bụrụ na anyị họrọ ya dịka ebe maka ezumike ezumike anyị n'ọdịnihu? Anyị ga-ahụ gị ebe ahụ!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Gaa na Dampier, ụsọ oké osimiri Australia na-enweghị nsogbu
Ebe gị honiimuunu